JENESIS 3 – iboigb.bibleinfo.info
1 Ma agwọ di aghughọ kari anu ọhia ọ bula nke Jehova, bú Chineke, mereri. O we si nwayi ahu, Ọ̀ gābu ezie na Chineke siri, Unu erila nkpuru sitere n’osisi ọ bula nke ubi a ab͕ara ogige?
2 Nwayi we si agwọ ahu, Ayi nēri nkpuru osisi nile nke ubi a ab͕ara ogige:
3 ma nkpuru nke osisi ahu nke di n’etiti ubi a ab͕ara ogige, Chineke asiwo, Unu erila nkpuru sitere na ya, unu emetukwala ya aka, ka unu we ghara inwu anwu.
4 Agwọ we si nwayi, Ọ dighi ọnwu unu nāghaghi inwu:
5 n’ihi na Chineke mara na n’ubọchi unu gēri nkpuru sitere na ya, mb͕e ahu ka agēmeghe anya-unu, unu ewe di ka Chineke, nāma ezi ihe na ihe ọjọ.
6 Nwayi we hu na osisi ahu di nma ihe-oriri, na ọ bu kwa ihe nāgu anya agu ile, na ihe anāchọsi ike ka osisi ahu bu kwa ime ka madu nwe uche, o were ufọdu nime nkpuru-ya, rie; o nye kwa di-ya, tinyere onwe-ya, o we rie.
7 Ewe meghe anya ha abua, ha we mara na ndi b͕a ọto ka ha bu; ha we dukọta akwukwọ osisi fig, mere onwe-ha ihe-ọkiké.
8 Ha we nu olu Jehova, bú Chineke, ka Ọ nējeghari n’ubi ahu ab͕ara ogige mb͕e ifufe nēfe n’ubọchi: madu ahu na nwunye-ya we zopu onwe-ha n’iru Jehova, bú Chineke, n’etiti osisi nke ubi ahu ab͕ara ogige.
9 Jehova, bú Chineke, we kpọ madu ahu òkù, si ya, Òle ebe i nọ?
10 O we si, Anurum olu-Gi n’ubi a ab͕ara ogige, m’we tua egwu, n’ihi na onye b͕a ọtọ ka m’bu; m’we zo onwem.
11 O we si, Ònye gosiri gi na onye b͕a ọtọ ka i bu? Ì riwo nkpuru sitere n’osisi ahu, nke M’nyere gi iwu bayere ya, ka i ghara iri nkpuru sitere na ya?
12 Madu ahu we si, Nwayi ahu nke I nyerem ka mu na ya biri, ya onwe-ya nyerem nkpuru sitere n’osisi ahu, m’we rie.
13 Jehova, bú Chineke, we si nwayi ahu, Gini bu nka i meworo? Nwayi we si, Agwọ ahu rafurum, m’we rie.
14 Jehova, bú Chineke, we si agwọ ahu, N’ihi na i mewo nka, ihe anābu ọnu ka i bu kari anu-ulo nile, na kari anu ọhia nile ọ bula; afọ-gi ka i gēji je ije, ọ bu kwa ájá ka i ganēri ubọchi nile nke ndu-gi:
15 iro ka M’gētiye kwa n’etiti gi na nwayi ahu, na n’etiti nkpuru-gi na nkpuru-ya: nkpuru ahu gēchifia gi n’isi, gi onwe-gi gēchifia kwa ya n’ikiri-ukwu.
16 Nwayi ahu ka Ọ siri, M’gēme ka ihe-nb͕u-gi na itu-ime-gi ba uba nke-uku; n’ihe-nb͕u ka i gāmu umu; n’ebe di-gi nọ ka ọchichọ-gi gādi, ya onwe-ya gāchi kwa gi.
17 Adam ka Ọ sikwara, N’ihi na i gewo nti n’olu nwunye-gi, i we rie nkpuru sitere n’osisi ahu, nke M’nyere gi iwu bayere ya, si, Gi erila nkpuru sitere na ya: ihe anābu ọnu ka ala bu n’ihi gi; n’ihe-nb͕u ka i gēri ihe sitere na ya ubọchi nile nke ndu-gi;
18 o bu kwa ogwu na uke ka ọ gēpuru gi; i gēri kwa ihe-ọkukú nke ubi;
19 n’ọsusọ iru-gi ka i gēri nri, rue mb͕e i gālata n’ala; n’ihi na esiri na ya weputa gi; n’ihi na ájá ka i bu, ọ bu kwa ájá ka i gālata.
20 Madu ahu we kpọ aha nwunye-ya Iv; n’ihi na nwayi ahu bu nne madu nile nwere ndu.
21 Jehova, bú Chineke, we were akpukpọ anu mere Adam, mekwara nwunye-ya, uwe-ime, we yibe ha.
22 Jehova, bú Chineke, we si, Le, madu ahu aghọwo ihe di ka otù onye nime ayi, n’ima ezi ihe na ihe ọjọ; ma ub͕u a, ka o we ghara iseti aka-ya, were nkpuru sitere n’osisi ahu nke ndu, rie, di ndu rue mb͕e ebighi-ebi:
23 Jehova, bú Chineke, we zipu ya n’ubi Iden ab͕ara ogige, ilu ọlu ala ahu nke esiri na ya weputa ya.
24 O we chupu madu ahu, me ka Cherubim nọdu n’akuku Iru-anyanwu nke ubi Iden ab͕ara ogige, ha na ire-ọku nke mma-agha nke nēchighari onwe-ya, ichebe uzọ osisi ahu nke ndu.